IMactracker ihlaziyiwe yongeza iMacBook Pro entsha kunye nezilungiso | ndisuka kuMac
Esona sicelo silungileyo sokufumana ngokweenkcukacha zonke iimpawu, ixabiso, umhla wokuqaliswa kunye nezinye iinkcukacha zezixhobo ze-Apple ngaphandle kwamathandabuzo yiMactracker. Le encyclopedia enkulu Apple kwifomati app ngoku ihlaziywe Mac Ukongeza iiPros ezintsha ze-14-intshi zeMacBook, i-16-intshi ye-MacBook Pros kwaye ngokucacileyo ukongeza ukulungiswa kwebug.
Bonke abo bangenayo i-app ekhutshelweyo kwi-Mac yabo banokukwenza oko Isimahla ukusuka Mac App Store. Ngaphandle kwamathandabuzo sesona sicelo silungileyo ukwazi zonke iinkcukacha zezixhobo ze-Apple kunye nesoftware, ukusuka kwi-Apple yokuqala ukuya kwi-16-intshi yeMacBook Pro yamva nje.
Esi sisicelo osifunayo ukwazi yonke into malunga nezixhobo ze-Apple
Olu lolunye lwezo zicelo esingadinwayo ekucebiseni ukuba ndingu-Mac kwaye loluphi na ulwazi oludingayo malunga nezixhobo ze-Apple, isoftware okanye into efanayo eya kufumaneka kuyo. Ngenye yezo zicelo ezihlala zifakwe kwiiMacs zam kwaye zindinceda kumaxesha amaninzi ukuya yazi nganye nganye kwiinkcukacha zeemveliso zenkampani ukusuka eCupertino.
ukufumana imveliso ngenombolo yayo yesazisi, ngomhla eyaqaliswa ngawo kwimarike okanye kwanexabiso layo lokuqala nezinye iimpawu zolu setyenziso. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisicelo esicetyiswa ngokupheleleyo. Sinako ukufumana IMactracker kwiVenkile yeApple yeMac simahla. Apha ngezantsi sikushiya ikhonkco ngqo kwivenkile yesicelo seMac, kodwa unayo iMactracker ekhoyo yezixhobo ze-iOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » IMactracker ihlaziyiwe yongeza iMacBook Pro entsha kunye nezilungiso